Google Adsense maka faili ntanetịime Martech Zone
Google Adsense maka faili ntanetịime
Satọde, Ọgọstụ 4, 2007 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 19, 2007 Douglas Karr
Mgbe ndepụta ahụ meghere ma mee ka ihe oyiyi ahụ rịọ, Google na-eme ka onyinyo ahụ gbanwee. Ekwesịrị ime otu a ka ị nwee ike ijikwa mmefu ego nke Mgbasa ozi. Yabụ, ọ bụrụ na m nwere mmefu ego nke $ 100 - mgbe m jiri mmefu ego ahụ, a ga-enyerịrị mgbasa ozi ọzọ maka onye ọzọ ga-emepe ndepụta ahụ.
The otu kemmasi ihe bụ nhọrọ nke Blogger ma ọ bụ ibughari Typedị. Gini mere enwere ihe mgbochi ọ bụla na otu ikpo okwu? Enwere mgbochi? O yiri ka teknụzụ a ọ nwere ike ịgbatị na saịtị ọ bụla RSS kwadoro. Banyere Google, enweghi oke ozi dị na saịtị ha.
Ana m atụ anya ịbanye maka Adsense maka faili ntanetịime mgbe ọ dị. Ọ bụrụ n’inweta ozi ndị ọzọ - biko nye nzaghachi maka nkọwa.
Asatọ Ihe Don'tmaghi Banyere M